Mon, Mar 30, 2020 at 7:36am
निजी स्कूलले एक महिनाको शुल्क छुट गर्नुपर्ने #आहा खबर# लकडाउन - गजल #आहा खबर# चरम आर्थिक संकट उत्पन्न भएपछि जर्मनीमा अर्थमन्त्रीले गरे आत्महत्या #आहा खबर# आजबाट लकडाउनको उल्लंघन गरे, सवारी नियन्त्रणमा, मानिसलाई तीन घण्डा होल्ड #आहा खबर# लकडाउनकै समयमा ८ वर्षीया बालिका बलात्कृत #आहा खबर# बढीमा १४ दिन लकडाउन थप्ने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय #आहा खबर# कोरोना विशेष अस्पतालमा एक व्यक्तिको मृत्यु #आहा खबर# दशजगामा अलपत्र नेपालीलाई प्रवेश दिइने उच्चस्तरीय समितिकाे निर्णय #आहा खबर# लकडाउनको अवधि एक साता लम्ब्याउन सरकारलाई सिफारिस #आहा खबर# लकडाउन लम्ब्याउन मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, अब कतिदिन बस्नुपर्ला भित्रै ? #आहा खबर# अमेरिकामा ३ सय नेपालीलाई कोरोना संक्रमण, ३० जना अस्पताल भर्ना #आहा खबर# चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री लिएर काठमाडाैं आइपुग्याे वाइडबडी जहाज #आहा खबर# सावधान: घरबाट बाहिर निस्किए जंगलमा ‘क्वारेन्टाइन’ #आहा खबर# तपाईलाई अर्गानिक तरकारी चाहिएको छ ? उपत्यकाका यी ठाउँमा पाइन्छ #आहा खबर# कोरोना संक्रमणबाट स्पेनकी राजकुमारीको मृत्यु #आहा खबर#
मंगलवार, १९ कार्तिक २०७६,	आहाखबर	1.5K
एजेन्सी, १९ कात्तिक ।
हीरा त्यस्तो तत्व हो जुन एकल तत्वले निर्माण हुन्छ । यसलाई काट्न अन्य धातुले सक्दैन । हीरालाई हीराले मात्र काट्न सकिन्छ ।
हीरा ९९.५ प्रतिशत कार्बनले बनेको हुन्छ । यसमा ०.५ प्रतिशत अन्य धातु मिश्रित हुन्छ । हीरा कोइलाबाट बन्छ । अन्य धातुहरुले हिराको रंग र आकार बनाउन मदत पुर्याउछ । खनिजको रूपहरूले हिराको पहिचान निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ ।
हीरा निर्माण हुने प्रक्रिया निकै लामो र कठिन हुन्छ। यसका लागि अत्यधिक तापमान र उच्च दबाव अनिवार्य रुपमा चाहिन्छ । हीरा पृथ्वी भन्दा करिब सय माइल गहिराईमा अवस्थित हुनेगर्छ । यसमा रहेको कार्बन परमाणुहरुको आकार हरेक दिशाबाट उस्तै हुने गर्छ ।
खनिज र ग्रेफाइट पनि पूर्ण रुपमा कार्बनबाट निर्मित हुन्छ । तर हीराको निर्माण प्रक्रिया र क्रिस्टल संरचना धेरै फरक हुनेगर्छ जसले हिराको फरक छुट्याउँछ । हिरालाई पनि खनिज मध्ये एकमा गनिन्छ । हिराको रसायनिक संरचना, क्रिस्टल संरचना र गठन प्रक्रियाले अद्भुत बनाउँछ ।